Doom at Your Service – Gold Channel Movies
May. 10, 2021 tvN
9.6 36 votes
Episode4May. 18, 2021
Episode6May. 25, 2021
Episode7May. 31, 2021
Episode9Jun. 07, 2021
Episode 11 Jun. 14, 2021
Episode 12 Jun. 15, 2021
Episode 13 Jun. 21, 2021
Episode 14 Jun. 22, 2021
Episode 15 Jun. 28, 2021
Episode 16 Jun. 29, 2021
Doom At Your Service(어느 날우리집 현관으로멸망이들어왔다)
Dong-Kyeong (Park Bo Young) ဟာ အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်ဝတ္ထုကုမ္ပဏီရဲ့ အယ်ဒီတာတစ်ဦးအဖြစ်လုပ်ကိုင်နေတာ ၆နှစ် နီးပါးရှိပါပြီ။ သူမရဲ့ တည်ငြိမ်နေတဲ့ဘဝလေးဟာ သူမရဲ့ ဦးနှောက်ကင်ဆာရောဂါကို သိရှိလိုက်ရချိန်မှာတော့ ပျက်စီးသွားရပါတော့တယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ အရာအားလုံးပျက်စီးဖို့ဆဲဆိုမိချိန်မှာ Myeol-Mang ကိုဆင့်ခေါ်မိသလိုဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
Myeol-Mang (Seo In-Guk) ဟာ နတ်ဘုရားနဲ့လူသားတွေကြား ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ မန်နေဂျာလိုမျိုးသူပါ။ သူ့ရဲ့နာမည်ကိုက ဂြိုဟ်ဆိုး၊ ကြမ္မာဆိုးလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ သူဟာ Dong-Kyeong ရဲ့ဘဝထဲကို ဝင်ရောက်လာပြီး နှစ်ယောက်သား အပေးအယူစာချုပ်တစ်ခုကို ချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
Dong-Kyeong တစ်ယောက် ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျနေတဲ့အပြင် မိမိအိမ်ပေါက်ဝထိရောက်ရှိလာတဲ့ ဂြိုဟ်ဆိုးကိုပါ ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်ကြမလဲ။ လူသားတစ်ယောက်နဲ့ ဂြိုဟ်ဆိုးတို့ကြား ဘယ်လိုအပေးအယူတွေရှိနေမှာလဲ။ ခံစားချက်တွေမရှိတဲ့ Myeol-Mang တစ်ယောက် လူသားတွေလိုခံစားတတ်လာမလား။ ဆိုးဝါးလှတဲ့ Dong-Kyeong ရဲ့ဘဝကြီးအတွက် Myeol-Mangဟာ လှပတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေး ဖြစ်စေမလားဆိုတာတွေကို အပတ်စဉ် GC Drama မှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်။
Translated by Winne Ngoon
Original title 어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다
zortilonrelSeptember 18, 2021Reply
Hey There. I found your blog the use of msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thank you for the post. I’ll definitely comeback.
FelicaSeptember 5, 2021Reply
Here is my homepage; asmr there – http://j.mp/2WShZQd
StanleySeptember 4, 2021Reply
Look at my web-site asmr with
MinervaSeptember 3, 2021Reply
a asmr (http://tinyurl.com/) little comment to support you.
GwenSeptember 2, 2021Reply
get scoliosis surgery in fact enjoyed account your blog posts.
LeeSeptember 2, 2021Reply
MamieSeptember 1, 2021Reply
IE still is the market leader andahuge section of other people will pass over
my blog post … off quest bars – t.co –
MichaleAugust 30, 2021Reply
My website: quest bars an, t.co,
U Lay GyiAugust 19, 2021Reply
Doom at your service ep13
file missing ဖြစ် နေတယ်
A NyoAugust 19, 2021Reply
down loz ya pr thay dl
Victor KhaiMay 26, 2021Reply
တော်ကြာမှWinnie Noong ပြန်တာ ကြည့်ရတော့တာ် 😁
HaruMay 18, 2021Reply
Htet HtetJune 26, 2021Reply